Michelle Obama paris အတွက်ပြပွဲလုပ်! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စာပေ • လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Michelle Obama paris အတွက်ပြပွဲလုပ်!
Michelle Obama paris အတွက်ပြပွဲလုပ်!
Alexis WAYAN 17 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
ကိုးကွယ်အကြားကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်နှင့်အမျိုးသမီးပွဲကျင်းပ, သူ့စာအုပ်တစ်ဦးဿုံပြန်ကြားလေ့ကျင့်ခန်း၌သူ၏ပရိသတ်တွေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ် "ဖြစ်လာခြင်း" မြှင့်တင်ရန်ကမ္ဘာခရီးစဉ်အပေါ်ယခင်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။
ပဲရစ်၌, Michelle Obama ကပြပွဲလုပ်
ဒါဟာအချက်မှာအချို့ 20 000 ပရိသတ်များ၏ရွှင်လန်းဖို့, တဦးတည်းသူမ၏ငါတို့ရှေ့မှာဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာကြည့်ဖို့ခဲအံ့အားသင့်သောအကျွမ်းတဝင်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာနေသည် AccorHotels Arena (ပဲရစ် XII ၏အားကစားကွင်းအတွင်းအင်္ဂါနေ့ညဦးယံ၌စုဝေးစေe) ။ တစ်ဦး ocher ဖဲညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွနှင့်ရွှေ, ဧရာကွင်း, သူမ၏ stilettos နှင့်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်အပြုံးအတွက်၎င်း၏ကြီးမားသောပုံသွင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူသူ့ဟာသူညီမျှ။ ပဲရစ် Michelle Obama ကပြပွဲသေချာနှင့်အထူးသဖြင့်သူ့စာအုပ်မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်လာ နိုဝင်ဘာလ 13 အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် (Fayard), ပြီးသားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 30 ကျော်မိတ္တူရောင်းချခဲ့သည်။ ငါလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ထောက်ခံမှုအတွက် Self-မြှင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းနှင့်အတူပြည်နယ်တစ်ဦးခေါင်းတစ်ခုကနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်ထိုက်တန်သေချာပါကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် skimp ပါဘူးလို့ပြောရပါမည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တွင်အလားတူ ilk နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေတစ်ပြပွဲပြီးနောက်သူမကြည့်ဖို့ပဲအချိန်အတွက်ပဲရစ်မှာရောက်ရှိ Notre Dame ရှို့ နှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးစကားမလွှဲမရှောင်, ထိုဘုရားကျောင်းမှာအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ "ကျွန်မကသိ, ဆိတျကှယျလူမြိုး၏သင်္ကေတကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာကိုယ်ကမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ငါ၏အသက်တော်စောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်ကိုမီးရှို့ခဲ့ငါ့ကိုပြောပြတဲ့အခါငါ "ကိုသင်နောက်နေပါတယ်!" ဟုပြောသည်ငါဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည်အထိငါမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မနည်းနည်းအခါပဲရစ်ရေခြားမြေခြားကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအိတ်ကပ် (အခန်းထဲမှာရယ်မောခြင်း) တွင်ဒိန်ခဲနှင့်အတူဘုရားကျောင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်သတိရပါ။ ကျနော်တို့ Notre Dame ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မည်, ငါတို့စည်းလုံးရှိနေဆဲရမည်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ရပါမည်။ " Isha Sesay, ကြံဆတီထွင်မှုမအခန်းကိုစွန့်ခွာ, တစ်ဦးကောင်းစွာထူထောင်အလေ့အကျင့်အတွက် masterclass အကြီးအကဲဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာ, သူမကဒီအောင်မြင်ရန်စတင်စာရင်းသွင်းထားသောတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားလျှင်သူမ၏မေးရန်မဟုတ်သတိထားဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကဝယ်ယူနေသည်။ အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများ, အဘယ်သူ၏ဂါထာဖြစ်ပါသည်အမေရိကန်အိပ်မက်နဲ့ကြုံးဝငျပတျသကျသောအရာအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားတယ် "ကျွန်မလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်, သင်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ " Young ကဟောင်းနွမ်း, အနက်ရောင်, အဖြူရောင်, friquéesသို့မဟုတ်မ (60 ယူရို 500 ကုန်ကျသောအရပ်တို့ကိုမ), သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရုပ်တုကိုအောင် selfies ကိုငံ့ ဖြစ်လာ ဧရာ screen ပေါ်မှာထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုများလုလင်များအတွက်ယခင်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး၏ကတိကဝတ် extolled စဉ် Destiny ရဲ့ကလေး (Beyonce ဟောင်းအုပ်စုကြီးမြတ်ရည်းစား Michelle Obama) ၏တွန်းကန်အားအသံကျယ်ဂီတအားဖြင့်အပူလက်, အမျိုးသမီးများ, ဒီမိုကရေစီနှင့်တစ်ဦးကျန်းမာဘဝ။ သူမစင်မြင့်ပေါ်သည်ထင်ရှားလာသောအခါကျွန်တော်တို့ကိုဟနေခြင်းစေရန်စတင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဂျက်လေယာဉ်မှကောင်းသောခံစားမှု။
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ, ကအလွန်ရယ်စရာပါပဲ။ ထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးကအခန်းကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လိုသိတယ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်အထူးသဖြင့်ဆန္ဒပြပွဲများစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နှစ်တစ် showman စေပြီ။ ပထမနှစ်ဝက်နာရီသူမကအခြေခံအားဖြင့်သူမ၏နှင့်သူ့ကိုဂုဏ်သိက္ခာများ၏တန်ဖိုးများကိုအောင်မြင်ပြီးသူအစ်ကို, အဘို့ယဇ်ပူဇော်ကြ၏သူကိုသူ့မိဘကသူ့စာအုပ်အခွန်ဆက် recites ဆဲနည်းနည်းနှေးကွေးမျက်ရည်ထင်ရှားနေသည်, နှိမျ့ခခြွငျးမြားနှငျ့ မျှဝေ; ရွေးချယ်မှုရှိသည်ဖို့ဘက်မှာစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ယူအခါတိုင်းအပြစ်ရှိ feeling ကိုရပ်တန့်ရမယ်သူမိန်းမတို့အားအခွန်ဆက်; သူမစကားလုံးတစ်လုံးတီထွင်ထားတဲ့အဘို့အဘားရက်မှအခွန်ကို "Swagelicious"ယင်းအခန်းထဲရှိလူအပေါင်းတို့သည်လူတဒါဇွဲရှိရှိသောအခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမဆီးတားနိုင်သောသိသင့်မှတပါး, သူမ၏သွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့အထုပ်ထားသူမကကြိုက်တယ်ရာရောသမ swag နှင့်အရသာ, သူမကသာမန်ဘဝပေးချင်ခဲ့တယ်အဘယ်သူကိုများအတွက်သူမကလက်နက်ဖြစ်၏လေးစားရှိကြောင်းသူ၏သမီးမှအခွန်ဆက် ( "အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင်အဆက်မပြတ်မိန်းကလေးတွေထက်ပို docile အောင်တည်ငြိမ်အောင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, ကျနော်တို့ခုခံတွန်းလှန်ရမယ်") စသည်တို့ကို
ပြီးတော့သူကထိုသက်သေကိုအခန်းတစ်ခန်းယူပြီးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရယ်မောကိုရှာဖွေလူရွှင်တော်မှစတင်သည်။ သူမကိုပြောတယ်, ဥပမာ, ထိုနေ့ရက်သည်သူမတစ်ဦးခက်ခဲတဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းကနေအနက်ရောင်မိန်းကလေးရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါအခါ, တစ်ဦးရှိခဲ့ပါသည် "Black ကဓနရှင်လူတန်းစား", Rich လူမည်း, လူမည်းမြို့ပြင်တွင်နေထိုင်သောနှင့်ကားတစ်စီးရှိသည်။ သူမကသူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြဿနာများအသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အခါ ( "နှစ်ခုဘဝတွေကိုပေါင်းမည်တကယ်ခက်ခဲသည်နှင့်ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်ကိုအသတိပေးခဲ့သည်") IVF မိတ်ဆက် - "ကျနော်တို့ကသွေးဆုံး၏အလုံအလောက်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမပြောကြဘူး။ " အခန်းထဲမှာအထီးသက်သေကိုယူခြင်း, သူကဆိုသည်: "ငါသည်ဘာသာရပ်အပေါ်ကျိန်းဝပ်မည်မဟုတ်, မစိုးရိမ်ပါ" - ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပြန် (သငျသညျအကြှနျုပျ၏ Darling ကြိုးစားခဲ့ "ငါသည်ဘားရက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်စိတ်ကူးဘယ်တော့မှငါသူမ၏ခင်ပွန်း၏လက်တီးတိုးသူ့ကိုရှုံးနိမ့်သောသူကိုမတ်ေတာပါမယား၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူအကြောင်းကိုခဲ့သည်", "အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည် ") သို့မဟုတျအခါအပြင်ဘက်အနိုင်နိုင်သုံးမိနစ် Trump ၏ဆိုက်ရောက်မီ, သူမလက်ရှိ၏နာမတော်ညောသာအချိန်ကနောက်ဆုံး cornflakes မျိုသူ၏သမီး၏မိန်းကလေးတွန်းလာသောအခါသူမအိမ်ဖြူတော်မှာဒီနောက်ဆုံးနံနက်ဖျောပွထားသ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ။
သူမသည်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်သိတယ်ဒါပေမယ့်လည်းသူမကြောင့်ဒီပထမဦးဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲဝန်ခံသည်လာသောအခါသူမ၏ရိုးသားမှုအသံထွက်အသိအမှတ်ပြု: "ကျနော်တဦးတည်းဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်, သူဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုပြန်ပြန်လည်စတင်သော။ သငျသညျကလူကိုသင်စော်ကားစေတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကိုယ်စားပြုရှိသောကြောင့်သင်သိရပါမည်, သင်လူငယ်များကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနာကျင်ပေမယ့်ငါ့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါ ပို. ပင်အလိုဆန္ဒကိုပေးတော်မူ၏ ငါကအနက်ရောင်ကြောင့်ငါသမားရိုးကျပုံစံအတွက်မပြန်ခဲ့ပါ, ကျွန်မသံသယ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်, သိသည်။ "
ညနေပိုင်းတွင်၏ဤအဆင့်မှာတဦးတည်းနိဂုံးချုပ်: ဤမိန်းမသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုအားမိမိအဝါရောင်ယွန်းလက်သည်း၏အဆုံးသည်အထိမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး, လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မတ်တပ်ရပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမကောင်းပြီ! Isha Sesay နောက်ဆုံးမှာလူတိုင်းစောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့အခါ, Michelle Obama က nods "သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုရောက်ရှိယခုအချိန်တွင် မှစ. , သငျသညျလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးသောအဘို့ကိုခုတ်ဖြတ်။ ငါအများကြီးပိုသိသာနှင့်အသုံးဝင်သောနိုင်ငံရေး၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါကပိုချိတ်ဆက်ငယ်ရွယ်သောခေါင်းဆောင်များ, အဘို့လမ်းကိုလုပ်ရပါမည်, ရှစ်နှစ်များအတွက်ပူဖောင်းအတွက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ "
မူဝါဒအပြင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံရေးကိုပယ်ဖြတ်မဆိုလိုပါ။ နောက်ဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်လူငယ်များအဘို့ဖြစ်၏: "သွားပြီးမဲပေး! သငျသညျမဲပေးဘူးဆိုရငျ, တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်သင်သည်သူတို့ရှေးခယျြတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်မည်! " တင့်တယ်နိဂုံးချုပ်, ဥရောပရွေးကောက်ပွဲများမတိုင်မီတစ်လ, အမေရိကန်ပြပွဲတစ်နည်းနည်းများလွန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ။
SOURCE မှ: https://www.liberation.fr/planete/2019/04/17/a-paris-michelle-obama-fait-le-show_1721880
dina Lohan တစ်အဆိုပြုချက်ကိုအင်တာနက်သဘောတူပြီးနောက်သူမ၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲ - လူတွေ
Aya Nakamura ဂီတအဘို့အရေကူးနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပ်!